'Yekani ukufobela' - kuyalwa isimame
UKUDLA ngendlela ukudla okunomsoco nokuzivocavoca yikhona okusenza sibe nomzimba ohehayo isitshudeni sasenyuvesi uPearl Garavaglia esisiza iningi labesifazane ngokulicobelela ngolwazi oluwusizo Izithombe: INSTAGRAM/ MS PEARL
BONGIWE ZUMA | August 20, 2019
ABESIFAZANE abayeke ukufobela noma yini bese bekhononda ngokukhuluphala. Umzimba wakho wukuphela kwawo, ukungathokozi ngawo kwenza ungenami ngempilo yakho futhi ube nokuzenyeza.
Kumele uwunakekele zisuka nje ngoba uzowudinga iminyaka eminingi yokuphila kwakho. Lawa ngamazwi entokazi esizakhele udumo nasezinkundleni zokuxhumana, enomzimva oqatha.
UPearl Garavalgia owenza izifundo zeMathematics Science enyuvesi yaseGoli, uthi akazilokothi izicoficofi ngisho ngabe usemcimbini noma uzikhiphele endaweni edayisa ukudla osekuphekiwe.
Uthi ukuzijwayeza ukwenza igilosa uziphekele wena ekhaya ozokudla, uhlele usuku nosuku ukuthi uzodlani, kubaluleke kakhulu uma ufuna ukunakekela umzimba wakho.
“Abantu abaningi bakhumbula ukudla uma sebelambile, bagcine becosha noma yini sebephuthunyiswa yindlala. Ukuhlela ukuthi uzodlani usuku lonke, kwenza ukuthi ungadli noma yini. Noma ngabe usemsebenzini, esikoleni noma uzihlalele ekhaya,” usho kanje.
Uma umbuka ungaze uzitshele ukuthi uyilaba abakhangisa bancintisane ngamamasela kodwa uthi akunjalo.
Uthi kodwa ezinkundleni zokuxhumana usekwenze kwaba wumsebenzi wakhe ukufundisa abesifazane ukuthi bangayilungisa kanjani imizimba yabo, ibe yile nto abazothi uma beyibuka esibukweni, ibachaze.
“Kuncane kakhulu okusuke kufanele umuntu akwenze uma efuna ukunciphisa isisindo somzimba noma ukugcina usayizi”.
Kulabo abavele sebezivocavoca, uthi kumele bakwenze kube mnandi ukuzivocavoca.
“Uma uzivocavoca kumele wenze nezinye izinto ukuze kulekelelane. Yenza izinto ezizoxukuza umqondo, umzimba negazi ngesikhathi. Ukukhuluphala akuyona into efika ngesikhathi bese isheshe idlula kalula. Ungavumeli ukuzenyeza, zama ukuwuziba lo muzwa othi ngeke wabukeka ngendlela oyifisayo. Ukuzifakela ingcindezi ngeke kukusize kodwa uma udla ngendlela efanele uzivocavoca uzobe uzisiza kakhulu,” kululeka uPearl.
UPearl uqale ukuzivocavoca eneminyaka ewu-15. Uthi uzama ngayo yonke indlela ukuthi anyakazise umzimba okungenani kahlanu ngesonto.
Ukuzivocavoca ekhaya esebenzisa ezinye zezinto ezikhona njengezitebhisi nokunye nakho uthi kumsebenzele kakhulu futhi uyabeluleka abesifazane ukuthi bangakubukeli phansi uma befuna imizimba eqatha.
Amasu acebisa ngawo abesifazane abafuna ukwakha imizimba eqoqekile
* Ukuze umzimba wakho ujwayele futhi uqoqeke, zama ukwenza ama-sit up awu-80 okungenani njalo ngosuku. Ungaqala uwenze ngokuwahlukanisa.
* Qinisekisa ukuthi konke ukudla ozilungiselela khona * -80% unemisoco nezakhamzimba ezifanele okubalwa nemifino nezithelo okuyizinto ezibalulekile emzimbeni.
* Lala ngesikhathi esifanele uthole ubuthongo obanele ngoba ukungalali nakho kunomthelela ngesisindo somzimba nendlela umuntu adla ngayo.
Ngokwakhe, kumele ulale okungenani amahora awu-6 kuya ku-8.
* Uma uzikhiphile ungabizi ukudla okubhalwe phansi nokukhangiswa ngakho, cela lokhu okunemifino okwaziyo ukuthi kufanele ukudle.
* Phuza amanzi, uzivocavoce, ubhukude, uqukule izinto ezizokulekelela ukulwa namafutha ezingalweni, esiswini nakwezinye izindawo ezicashile.